Thomson ဗွီဒီယိုကွန်ယက်များ Stephan Richard ဒုတိယဥက္ကPresident္ဌ၊ မဟာဗျူဟာနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်အမည်များ Stephan ရစ်ချတ်ဒုတိယသမ္မတ, မဟာဗျူဟာနှင့်စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး
သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်အမည်များ Stephan ရစ်ချတ်ဒုတိယသမ္မတ, မဟာဗျူဟာနှင့်စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး
RENNES, ပြင်သစ် - နိုဝင်ဘာ 25, 2015 - အမေရိကတိုက်အတွက်၎င်း၏လျှင်မြန်စွာတိုးချဲ့စျေးကွက်ရှိနေခြင်းအချက်ပြ, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် Stephan ရစ်ချတ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမဟာဗျူဟာနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအမည်ရှိသိရသည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို, ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်, ရစ်ချတ်မြောက်ပိုင်း, အလယ်ပိုင်းနှင့်တောင်အမေရိကအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ OTT မိတ်ဖက်များနှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
"အရှိန်အဟုန်အမေရိကန်နှင့်အမေရိကတိုက်တစ်လျှောက်လုံးသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်တည်ဆောက်နေသည် - အထူးသဖြင့် OTT များထားရှိပေးရန်နှင့် ပတ်သက်. - ကျွန်တော်တို့ဒေသအတွက်အများအပြားမကြာသေးခင်ကအဓိကအောင်မြင်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်," အဲရစ် Gallier, ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, စျေးကွက်, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကဆိုပါတယ် ။ "ကုမ္ပဏီအောင်မြင်မှုကားမောင်းတဲ့သက်သေပြချက်တွင် track record နှင့်အတူ, Stephan ကျွန်တော်တို့ရဲ့ OTT စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရူပါရုံကိုပုံဖော်ဖို့နဲ့ဗီဒီယိုဂေဟစနစ်အတွင်းနှင့်ကျော်လွန်ပြီးမိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများကိုလိုက်ရန်စံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်ဤအခနျးကဏ်ဍမှခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်တစ်စည်းစိမ်ကိုဆောင်တတ်၏။ "
ရစ်ချတ်လောက်လွှဲမီဒီယာ, သူထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရှိရာတစ်ဦး Echostar ကုမ္ပဏီထံမှသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူလည်းကိန်းပကတိတန်ဖိုးဗီဒီယိုမှာထုတ်ကုန်မန်နေဂျာများနှင့်အရောင်းအင်ဂျင်နီယာများ၏အနေအထားကျင်းပနှင့် Kasenna (ယခု Espial), တစ်ဦး VOD နှင့် middleware ကုမ္ပဏီအတွက်အမျိုးမျိုးသောအင်ဂျင်နီယာ, အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအတွက် Next ကို TV ကထိပ်သီးအစည်းအဝေး, ဒီဇင်ဘာ 1 မှာ OTT များထားရှိဘို့က၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ချုံ့ဖြေရှင်းချက်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
အဆင့်မြင့်ဗွီဒီယိုချုံ့ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာတစ်ဦးကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်, မြေပြင်, မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်, ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အမြင့်ဆုံးသိပ်သည်းဆမှာသာလွန်သောဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်အလှူငွေအဘို့အနိမ့်ဆုံး Bandwidth ကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါထုတ်လွှင့်အာဏာ ဂြိုဟ်တု, cable IPTVနှင့် OTT န်ဆောင်မှု။ တိုင်းမျက်နှာပြင် (R) ချဉ်းကပ်မှုနောက်ကွယ်မှာက၎င်း၏ဆန်းသစ်မှတဆင့်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်သည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်စားသုံးမိ / ပလေးအောက်, အမှတ်တံဆိပ်, ကြော်ငြာသွင်း, encoding က / transcoding နှင့်ထုပ်ပိုးများအတွက် All-လွှမ်းခြုံကဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦများကိုဖန်တီးရန် On-ဝုဏ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးနဲ့ cloud-based အရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ် နည်းပညာများ။ မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေအခုသူတို့ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းတိုင်းစက်ကိရိယာနှင့် platform ပေါ်တွင် Multi-screen ကိုန်ဆောင်မှုများအတွက်မယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်တိုင်း key ကိုစွမ်းရည်ရှိသည်။ တိုင်း Screen ကိုနောက်ကွယ်မှသင်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ အလည်အပတ် www.thomson-networks.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/ThomsonVN/ThomsonVN_Stephan-Richard.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Stephan ရစ်ချတ်, ဒုတိယသမ္မတ, မဟာဗျူဟာနှင့်စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/thomson-video-networks
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော Stephan ရစ်ချက် သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် ဒုတိယသမ္မတ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-11-25
ယခင်: ကော်ပိုရိတ်စာရေးဆရာ / အယ်ဒီတာ
နောက်တစ်ခု: Marine xVu (TM) ယခုသန်း 30 ကျော်ဖုန်းများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း